Ny famafana dia afaka manafoana ny kilema toy ny long-as-cast mandritra ny fandefasana smelting ary manatsara ny mikraoba. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fitehirizana ny làlam-by feno, ny toetra mekanikan'ny famonoana dia mazàna tsara kokoa noho ny fametahana fitaovana mitovy. Ho an'ny ...
Inona avy ireo fiasan'ny flanges fiara novaina sy gasket hub? 1. Tsara tarehy, na ny kodiarana tany am-boalohany na ny kodiarana novaina, noho ny antony hafahafa isan-karazany, ny kodiarana sy ny kodiarana dia tsy mifanandrify amin'ny volon'ny fiara mihitsy. Ny mifanitsy eto dia midika fa ny haben'ny kodiarana dia mihoatra ny latsaky ny ...
Ny fanamboarana ny fametahana kodiarana amin'ny ankapobeny dia ny fizotry ny hafanana, ny fanovana ary ny fampangatsiahana. Ny fametahana kodiarana dia mampiseho fanjakana samihafa eo amin'ny fandaminana noho ny firafitry ny fitaovana sy ny haben'ny fametahana kodiarana. Raha fintinina dia misy ireto teboka roa manaraka ireto. 1. Toetran'ny fandaminana lar ...